‘Qaamoleen nageenyaa, aanga’ootni mirga namoomaa sarban gaafatamuu qabu’-HRW – Ayyaantuu Online
HUMAN RIGHTS WATCH, KOMINIKEESHINII DAMBIDOOLLOO
(BBC Afaan Oromoo) — Addabaabayitti ajjeefamuun dargaggoo Amaanu’eel Wandimmuu sarbama qaamoleen nageenyaa Itoophiyaa keessatti raawwataniif gaafatamni akka hin jirre agarsiisaa jedhe Jaarmiyaan idila addunyaa mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch.
Caamsaa 11, 2021 Godina Qeellam Wallaggaa Magaalaa Dambidoolloo keessatti dargaggoon ganna 17 Amaanu’eel Wandimmuu ‘miseensa abbaa torbeeti’ jedhamee qaamolee nageenyaan erga to’annoo jala oolfamee booda adda baabayii magaalichaarratti ajjeefame.
”Viidiyoon kominikeeshinii magaalichaan miidiyaa hawaasaarratti gadhiifame qaamoleen nageenyaa Amaanu’eel dhiigaa jirutti osoo qoosanii fi morma isaatti shugguxiin rarraafamee agarsiisaa” jedha ibsi HRW Waxabajjii 10, 2021baase kun.
”Guyyaa sana bakkeetti ajjeefame” kan jedhu ibsichi, ”torbanoota achii booda turan keessatti qaamoleen nageenyaa maatii Amaanu’eel dabalatee jiraattota maagalichaa hiraarsaafi hidhaa tuaranii” jedha.
Daayireektarri HRW damee Gaanfa Afrikaa Latishiyaa baadeer ” aanga’oota Itoophiyaan adeemsa seeraa malee ajjeefamuun dargaggoo kanaa lubbuu namaaf kabaja dhabuu ajaa’ibsiisaadha” jedhan.
Itti dabaluunis ”qaamoleen nageenyaafi aanga’oonnii naannoo ta’ii sukkaneessaa kana viidiyoon waraabanii gadhiisuun isaanii aanga’oonni kun seeraa ol akka jiraniifi kana gochuun waan fidu hin qabu jedhanii kan amanan ta’u agarsiisa”jedhan.
Ajjeefamuu dargaggoo Amaanu’eel Wandimmuun walqabatee BBC’n hoogganaa Komisnikeeshinii Mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa dubbisee kan ture yoo ta’u, sochii hidhannoo Oromiyaa keessa jiru sababeeffachuun tarkaanfiin madaalawaan akka fudhatamu qajeelfamni kennameera jedhanii ture.
Mootummaan ajjeefamuu dargaggoo Amaanu’eel Wandimmuuf sababni dhiyeessu miseensa abbaa torbeeti, aanga’oota mootummaa dhokatanii ajjeesuu keessatti hirmaateera kan jedhudha.
Guyyaa ajjeefame sanas ”namatti dhukaasee osoo baqatuu qabamee” sababa jedhu dhiyeessa.
‘Ajjeechaan murtee seeraa malee Dambidollootti raawwatame yaadeessaadha’
Ajjeechaan dargaggoo Amaanu’eel miidiyaa hawaasaa gubbaatti dheekkamsa kaase
Faallaa kanaan abbaan Amaanu’eel obbo Wandimmuu Kabbadaa ilmi isaanii akka mootummaan jedhu miseensa abbaa torbee osoo hin taane daaqonii mana Amantaa Kiristaanaa Ortodoksii ta’uu fi gocha jedhame keessatti akka hin hirmaanne dubbatu.
HRW ibsa isaa kana keessatti jiraattota magaalaa dambidoolloo 11 dubbisuu fi dabalataaniis viidiyoowwan fi suurota miidiyaa hawaasaa fi miidiyaalee biroorratti maxxanfaman qorachuu ibsa.
Ibsa mootummaan ajjeefamuu Amaanu’eeliin walqabatee kennes hordofuu ibseera.
Namoota ijaan argan irraan odeeffadhe jechuun HRW akka gabaasetti, Caamsaa 11 ganama sa’aa lamatti qaamoleen nageenyaa humna addaa Oromiyaa ganda 07 dhiyeenya mana jireenyaa isaarraa Amaanu’eeliin to’atanii jedhe.
Jiraattota magaalichaa keessaa kan HRW dubbise tokko, humni addaa Oromiyaa Amaanu’eeliin erga to’atanii booda ”waan hunda fayyadamuun reebaa turan, koppheedhaan, harkaan, uleefi hudduu qawween rukutaa turan” jechuun himeera.
” Mataa keessa dhahamee kufee ture. Argaaf nama suruura.”
Akka mootummaan jedhu nama rasaasaan rukutee osoo hin ta’iin, qabanii isa reebaa jiran naannoo ganda 05 yoo gahu baqatee osoo fiiguu miila isaa rasaasaan dhahani jechuun jiraattotni himaniiru.
HRW Viidiyoo Amaanu’eel qaamolee nageenyaan marfamee daandii magaalichaarra ”ani abbaa torbeedha ana argaa jiila” jechaa isa deemu qorachuu ibseera.
Namni kaan waamamee kaan fedhiidhaan adda baabayiitti isa marsee ilaalaa akka tureefi qaamoleen nageenyaas uummata walitti qabuun ”namni tokko qaama nageenyaa magaalichaa nan haleela yoo jedhe hiree walfakkaan akka isa eeggatu itti himani” jedha jiraatan tokko.
‘Qaama nama ajjeesurratti tarkaanfii walgitu fudhachuuf kallatiin kaa’ameera’
‘Takkaa maqaansaa sababa kanaan dha’amee hinbeeku ‘- Abbaa Amaanu’eel
Jiraattota HRW dubbise keessaa afur aanga’oonni akkamiin Amaanu’eeliin mataa isaa akka naannessu itti himanii achii booda bakka jiraattotni jiranitti si’a lama itti dhukaasan ibsaniiru.
Amaanu’eel erga ajjeefamee booda jiraattotni gara reeffa isaatti akka hin siqne dhorkamuufi qaamni nageenyaa biroo maatii Amaanu’eel buufata Poolisii turan fidanii dhufuu jiraattorarraa qulqulleefachuus HRW gabaaseera.
Abbaan Amaanu’eel obbo Wandimmuu Kabbaadaa turtii BBC’ waliin taasisaniin qaamoleen nageenyaa ganama ilmi isaanii ajjeefame mana isaanii sakatta’uu fi isaan fuudhee bahuu fi adda baabayiirratti reeffii ilma isaanii harki isaa duubatti hidhamee kufee arguu himanii ture.
Harmeen Amanu’eel reeffa ilma isaanii battala arganatti booyichaafi iyya dhagessisuu isaaniif reebamuu, reeffa osoo hin fudhatiin dirqamanii manatti deebifamuus BBC’f mirkneessanii turan.
Jiraattotni HRW dubbisees ragaa BBC’n argateen walsima.
”Harka ishee ballistee maaloo maaloo osoo jettuu uleen dhaanani. Abbaaniis reeffa fudhachuuf gaafate. Harka ballisee kadhachaa ture. Haati reebamtee kuftee ture” jedhan maddeen odeeffannoo HRW.
Reeffa Amaanu’eel jaarsoliin biyyaa magaalittii qaamolee nageenyaa kadhatanii fudhachuun awwaalame.
Mootummaan ajjeechaan dargaggoo Amaanu’eel irratti raawwatame adda baabayiitti mitii jechuun falma.
Itti-gaafatamaan nageenyaa godina Qeellam Wallaggaa Obbo Tasammaa Waariyoo BBC’tti yoo himan ”namni addabaabaayiitti baafamee ajjeefame hin jiru” jedhani.
Dargaggoon ajjeefame kun bosona kan tureefi loltuu ‘ABO Shaneetis jedhan.
”Shugguxii tokko qabatee dhufee magaalaa keessatti nama nagaa irratti dhukaasa yeroo banutti qaamni keenya to’achuuf yaalus isaanittis dhukaasa yeroo inni banu tarkaanfii irratti fudhatanii shugguxicha harkaa fuudhan,” jechuun, dargaggoon kun shakkamaa miti jechuun dubbatu Obbo Tasammaan.
”Aanga’oonni Mootummaa ajjeechaa seeraan alaa callisanii ilaalan”
Seerri idila addunyaa Mirga Namoomaafi seera namoomaa ajjeechaa adeemsa seeraa malee raawwatamu, dararaa fi namoota hidhaa jiran hiraarsuu ni dhorka.
Itoophiyaan qaama seera idila addunyaa kana mallatteesiteedha kan jedhu HRW, Itoophiyaan qaamolee nageenyaa yakka akka kanaa raawwatan gaafatamtoota gochuu hanqachuun yakkoonni kunniin akka hammaatan godheera jedha.
Mootummaan Itoophiyaa ajjeechaa adeemsa haqaa malee raawwatamu ifatti balaaleffachuun caasaa nageenyaa sadarkaa federaalaa hanga naannootti jiran irratti rifoormii gaggeessuu qabas jedheera.
”Aanga’oonni Itoophiyaa ajjeechaawwan hammaachaa jiran ilaalchisee osoo qorannoo gochuun irra jiruu callisanii ilaalan’ jedhu Letishiyaa Baader.
”Aanga’oonni sarbama mirgaa jiraattota Oromiyaa akka Amaanu’eel raasaa jiru dhaabsisuuf kutannoo qaban mul’isuu qabu, kanneen gaafatamummaa qaban sadarkaa kamirrayyuu yoo jiraatan haqa dura dhaabachuu qabu” jedhaniiru.